Maamule iskuul kuyaal Oslo oo keenay hab cusub oo kula kulmi karo waalidiinta uusan waligood la kulmin. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Maamule iskuul kuyaal Oslo oo keenay hab cusub oo kula kulmi karo...
Maamule iskuul kuyaal Oslo oo keenay hab cusub oo kula kulmi karo waalidiinta uusan waligood la kulmin.
Ellen Sundby oo ah maamule iskuul kuyaal Oslo ayaa keenay hab cusub uu kula kulmi karo, waalidiinta caruurta iskuulkeeda dhigta oo aysan la kulmin wali. Habkaas oo ah inay ayagu booqasho ku tagaan guryaha waalidiinta, halkaas ay isku arkaan, bartaana waalidka caruurta.
Fadumo Ali Jimaale oo ah Hooyo dhashay wiil yar oo dhigta iskuulka ayaa yaabtay markii ay aragtay warqada ka socoto iskuulka, si ay u hubsatana akhrisay laba jeer. waxaan markii hore is waydiiyay maxay idinka rabaan, ma waxay rabaan inay ogaadaan inuu cunuga lekse xaafada ku sameeyo iyo in kale. Run ahaantii waxaan umalaynayay inuu arinta barneverka ay ka danbeeyeen.
Faadumo iyo maamulaha iskuulka ayaa ugu danbeyn qiray in fikradan ay tahay mid fiican, inkasta oo markii hore ay ka yaabtay.
Les saken på Norsk:
Previous articleHaweeney 67 jir ah oo loo heysto ereyo cunsurinimo ah oo ay kula kacday soomaalida
Next articleqof Soomaali ah oo caawa toori lagu galiyay Kristiansand